MIKAROSA Airbus Military A400M v2.0 FSX & P3D - Freeware
Modely noforonina tao amin'ny Gmax niaraka tamin'ny vatan-kaonty virtoaly sy feo namboarina, misy loko roa misy: Royal Air Force, French Air Force, German Air Force, Cam. Ahitana ny fanavaozana ny maodelin'ny sidina sy ny fijerena fakan-tsary nanomboka ny 22 aprily 2015. Azo jerena ao amin'ny https://oldpat.e-monsite.com
Ao amin'ny tontolo tena izy
Ny Airbus A400M dia miaramila fiaramanidina fitaterana natao ny Airbus zavatra maro, ary antenaina mba hiditra fanompoana eo 20,123 sy 20,144. Misy amin'izao fotoana izao fehezin'ny valo 174 dika mitovy amin'ny firenena: Alemaina, Frantsa, Espaina, Angletera, Torkia, Belzika, Luxembourg sy Malezia. Afrika Atsimo kosa dia nofoanana ny filaminana sy ny Shily tsy hanavao ny taratasy am-boalohany ny fikasana. Ny tanjona dia ny hanampiana na hanolo efa misy fleets, fahanterana, ahitana ny American C-130 Hercules na C-160 Franco-Alemana Transall.
Direction ny fihodinan'ny ny Helisin'ny
Ny antsipirihany dia tena zava-dehibe: ny hevitra DBE (mandry eo anelanelan'ny Fitaovana), izany hoe "vary, mandry eo anelanelan'ny amin'ny milina." Isaky ny antsasaky ny elatry, ny tari-dalana ny fihodinan'ny ny Helisin'ny amin'ny andaniny sy ny milina ihany no mampiverina azy, ny midina hetsika ny lelany izay mitranga eo amin'ny fitaovana ao amin'ny momba ny afovoan'ny ny elany, ka ny fikorianan'ny ny fofonain'ny ny lelany dia saika miangona.
Izany fanahafana no voafidy voalohany indrindra mba hampihenana ny asymmetry izay mitranga raha toa ny maotera tsy fahombiazana, indrindra fa ny any ivelany maotera (izay mahazatra amin'ny fiaramanidina miaramila tao amin'ny teatra ny asa). Fa izany ihany koa dia manana fiantraikany maro: tsy ezaka eo amin'ny elatry, izay fanampiana azo atao rafitra. Ankoatra izany, ny haben'ny ny mandresy dia efa nihena hatramin'ny fanitsiana Yaw dia mety ho kely raha ny maotera tsy fahombiazana, mampihena tarihiny. Ireo lafin-javatra roa lehibe mamela ny fahaizany isan-karazany, na mitondra ny mavesatra ho an'ny ny mitovy payload habetsahan'ny carburant50. Ny milina efatra dia tena mitovy, fa fitaovana roa ireo fitaovana miaraka amin'ny fitaovana-javatra mifanohitra amin'ny tari-dalana ny fihodinan'ny ny Mpanosika.
Tsy tahaka ny An-70 sy An-22, A400M tsy mampiasa Helisin'ny, lehibe manokana ny Rosiana-Okrainiana maotera, aerodynamic soa dia offset araka ny lanjany sy be pitsiny kokoa. (Source Wikipedia)
Nohavaozina taminy 01 / 12 / 2018 : Fifandraisana amin'ny Prepar3D v4 +, fanoloana gazy 32-bit. Auto-installer dikan-teny 10.5
Nohavaozina taminy 14 / 05 / 2015 : Version 2.0 - Battery VC vaovao, Avionic, Nav-GPS, Autobrake, Jiro, Deice, Pump Fuel ary Generator, fampitandremana Master, fampandrenesana TCAS, jiro status Gear, FMC, pejy solika, EICAS, Callouts, seza havanana / avaratra vaovao Ny fahitana VC sy ny rafitra elektrika nohavaozina. Tafiditra ao koa ny fanavaozana ny dinamika momba ny sidina farany nataon'i Bob Chicilo.
Downloads 79 861
Nohavaozina taminy 01-12-2018
Patrick Le Luyer, navoakan'i Andreas Rotowski, P3Dv4 fifanarahana amin'i Rikoooo